Blog – Impact Hub Yangon
၂၀၂၂ ခုနစ်အတွက် Falling Walls Lab Myanmar 2022 မှလျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ်ယူနေပါပြီ။ Falling Walls Lab သည် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့် ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများမှ ၄င်းတို့ရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိပြီး ခိုင်မာသော အတွေးအခေါ်များ၊ သုတေသန စီမံကိန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဂျာမဏီနိုင်ငံ၏ မြီု့တော် ဘာလင်မြို့တွင် တင်ပြန်ိုင်မည့် နေရာတစ်ခုအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ Impact Hub Yangon သည် ထပ်မံ၍ မိတ်ဖက်အနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနစ်အတွက် Falling Walls Lab Myanmar တွင် Scholar Institute,…
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် လတ်တလော အခြေအနေများ ကြောင့် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အလွန်ခက်ခဲသော အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုအခြေအနေများကြောင့် စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းများ ပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီး လက်ရှိပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များမှာလည်း အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှာလည်း ရေရှည်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သော ဈေးကွက်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ ကျိုးပျက်ခြင်း၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသော ပြဿနာများနှင့် ငွေကြေးမတည်ငြိမ်သော ပြဿနာများ အစရှိသည်တို့ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အခက်အခဲများကြားမှာ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရန်အတွက် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများသည် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အသစ်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ဈေးကွက်အသစ်များ ရရှိစေခြင်း စသည့် အမျိုးမျိုးသော ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို…
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယ သင်္ကြန်ကာလဖြစ်တဲ့ ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ မှ ဧပြီလ (၁၇) ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ အထိ Impact Hub Yangon ၏ ရုံးနှင့် Co-working Space ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များ ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာလိုပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ မေတ္တာတရားများ ပြန့်ပွားပါစေကြောင်းဆုတောင်းနဲ့ အတူ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအခါသမယကို လုံခြုံစွာနဲ့ချစ်ရတဲ့ မိသားစုများနဲ့ အတူတကွ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း Impact Hub Yangon Team မှဆုတောင်း မေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။ We would like to announce that our office and…
MeetaMember from Accelerate Regional Membership 2021 Cycle!
Accelerate Regional Membership မှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုလေ့လာမှုများရရှိလဲဆိုတာကို Travel with Me ရဲ့ တည်ထောင်သူဖြစ်သူ ကိုမျိုးမင်းသူက သူရဲ့ Accelerate Membership အတွေ့အကြုံများကို ပြောပြထားပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ Accelerate Regional Membership မှာ ပါဝင်ဖို့ လျှောက်ထားပြီး မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ လိုအပ်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ အကူအညီများကို ရယူလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် http://www.acceleratemembership.net မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Accelerate Regional Membership ကို နောက်ဆုံးလျှောက်ထားရမည့်ရက်မှာ ဧပြီလ (၁၇)၊ ၂၀၂၂ ဖြစ်ပါတယ်။ What’s it like being an…
Deadline Extended! (Accelerate Regional Membership)
#AccelerateRegionalMembership ၏လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအား ဧပြီလ (၁၇)၊ ၂၀၂၂ အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။ စနစ်တကျစီမံပြုလုပ်ထားတဲ့ အကူအညီများ ရရှိဖို့နဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းမှာ မိမိရဲ့ ကွန်ရက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့နော်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် www.acceleratemembership.net မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Great news! The application period for #AccelerateRegionalMembership is extended until April 17, 2022. Don’t miss out on the chance to get tailored support and build your…
Only (2) Days left to the Application Closing!
📣 Accelerate Regional Membership မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် လျှောက်ထားချိန် (၂) ရက်ပဲကျန်တော့တဲ့အတွက် ခုပဲလျှောက်ထားလိုက်ပါတော့နော်။ 🎯 မိမိလုပ်ငန်းကို တိုးတက်စေမဲ့ အခွင့်အရေးကို အခုပဲ အမိအရ ရယူလိုက်ပါ။ 🔎 ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် http://www.acceleratemembership.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 📣2days to go! Take part in the #AccelerateRegionalMembership now. 🎯 Grab this chance to help you grow your business. 🔎 Visit http://www.acceleratemembership.net for more information.
What learnings are in Accelerate Regional Membership?
Accelerate Regional Membership ၂၀၂၂ မှ ဘယ်လို လေ့လာသင်ယူမှုများ ရရှိနိုင်မလဲ? မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် သေချာပြုလုပ်ထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်ဖို့အတွက် အခုပဲလျှောက်ထားလိုက်ပါနော်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် http://www.acceleratemembership.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ What learnings are in store for you in the 2022 Accelerate Regional Membership cycle? Apply to beamember today and take advantage of the benefits that are curated just for…
10 Days to the Application Closing!
Accelerate Regional Membership ကိုလျှောက်ထားနိုင်ရန် (၁၀) ရက်သာကျန်ပါတော့တယ်။ လုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်နိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးကို အမိအရ ရယူလိုက်ပါနော်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် http://www.acceleratemembership.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 10 days to go! Take part in the #AccelerateRegionalMembership now. Grab this chance to help you grow your business. Visit http://www.acceleratemembership.net for more information.
ARM help address at least two of the UN Sustainable Development Goals!
Accelerate Regional Membership သည်ကုလသမဂ္ဂမှချမှတ်ထားသော စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (၁၇)ခုအနက်မှ အနည်းဆုံးနှစ်ခုအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို http://www.acceleratemembership.com တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ The #AccelerateRegionalMembership helps address at least two of the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. Check out http://www.acceleratemembership.net for more details.
15 Days left to the Application Closing!
Accelerate Regional Membership မှာပါဝင်ရန် လျှောက်ထားနိုင်မဲ့ အချိန်မှာ (၁၅) ရက်သာလိုပါတော့တယ်။ လုပ်ငန်းတိုးတက်နိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးကို အခုပဲ http://acceleratemembership.net မှာလျှောက်ထားပြီးအမိအရ ရယူလိုက်ပါ။ 15 days to go! Take part in the #AccelerateRegionalMembership now. Grab this chance to help you grow your business. Visit http://www.acceleratemembership.net for more information.